Soo dejisan Sandboxie 4.2 iyo 5.07 beta – Vessoft
Soo dejisan Sandboxie
Sandboxie – software ah in uu ordo faylasha iyo codsiyada kala duwan ee deegaanka dalwaddii. Software wuxuu suuragelinayaa in uu ordo softwares kala duwan iyo files kala adeegyada kale ee habka sidaas ka hortagga ilaalinta xogta of software a socda ee fayl nidaamka ama storages kale. Dukaamada xogta socodsiinta software in deegaanka go’doonsan kuwaas oo laga saari karo marka la dhameeyo shaqada Sandboxie. Software waxuu si loo maqli daalacashada in deegaan ka ilaaliya nidaamka ka fayrusyada kala duwan iyo goobo xaasidnimo. Sandboxie kale oo ku jira qalab ka reserved auto-bilowga codsiyada iyada oo jawi dalwaddii.
Maamula softwares iyo files ee deegaanka dalwaddii
Daahiriyo xogta lagu kaydiyaa shaqada la software ka dib
Helitaanka internetka iyada deegaanka dalwaddii
Meeshay of auto-bilowga ah ee codsiyada ee deegaanka dalwaddii
Sandboxie Software la xiriira:
English, فارسی, Русский, Tiếng Việt... Startpack Launcher 1.0.9
العربية, English, Français, Español... Free Dailymotion Download 1.0.59.118
English, Français, Español, Português... XMind 3.6.51